Public Health Concern स्वास्थ्य सेवा बिभागको महानिर्देशकमा डा.रोशन पोखरेल ! – Public Health Concern
स्वास्थ्य सेवा बिभागको महानिर्देशकमा डा.रोशन पोखरेल !
डा. प्याकुरेलले अवकाश पाएसँगै मन्त्रालयमा प्रमुख विशेषज्ञको पद रिक्त हुने भएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्यसेवा ऐनको प्रावधानअनुसार उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुन लागेका डा. प्याकुरेलको सेवाअवधि १ वर्ष थप्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । कानुनी रूपमा प्रमुख विशेषज्ञको जिम्मेवारी धेरै भएको अवस्थामा सो पद खाली हुन नदिन मन्त्रिपरिषद्ले उनको म्याद थप गर्ने अनुमान लगाइएको थियो । तर, त्यसो हुन नसकेपछि १२औँ तहको प्रमुख विशेषज्ञको पदसँगै विभागको महानिर्देशक पद पनि रिक्त हुन पुगेको थियो ।श्रोत हेल्थपोस्ट नेपाल